‘पुलिस दाजु ! त्यस्तो केही पनि छैन् म आफैंले गरेको हो’ जेनी कुँवरको नोट…? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ २५, २०७८ समय: १५:४६:४८
काठमाडौ । पशुपति मन्दीर आसपासमा प्राय देखिने गरेकी नायीका जेनी कुँवर विहिवार साँझ अचानक काठमाडौंको थापागाउँस्थित सनराइज सिटी होम्स अपार्टमेन्टमा मृ त फेला परे पछि सबैलाई आश्चर्य बनायो । पतिसंगै अपार्टमेन्टमा बस्दै आएकी नायिका जेनी कुँवर पछिल्लो समय युट्युवमा भाइरल हुँदै आएकी थिइन् ।
प्रहरीले घटनास्थलमा उनले लेखेको नोट पनि फेला पारेको छ । बिहीबार साँझ अपार्टमेन्टको तेस्रो तल्लामा उनी मृ त अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । अपार्टमेन्टमा भेटिएको सु सा इ ड नोटमा जेनीले आफ्नो मृत्युमा ‘कसैको दो ष नभएको’ सन्देश छाडेकी छिन् । उनी पछिल्लो समय डिप्रेशनबाट पी डि त थिइन् ।
ढोकामा किला ठो के र डोरीको पा सो ला गेको अवस्थामा भेटिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले रातोपाटीलाई बताए ।
नोटमा आफु ‘डिप्रेशनको रागी’ भएको पनि उनले लेखेकी छन् । ‘यसमा कसैलाई दो ष छैन, मेरो आफ्नै हिसाबमा मैले यो गरेको हुँ ।’पुलिस दाजु, त्यस्तो केही पनि छैन् म आफैंले गरेको हो’ नोटमा भनिएको छ– ‘यसमा कसैको दो ष छैन ।’
श्रीमान अपार्टमेन्टमा नभएको बेलामा उनले यस्तो बाटो रोजेकी थिइन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डिएसपी मिमबहादुर लामा नेतृत्वको टोली र फरेन्सिक चिकित्सकले शवको अवस्था र घटनास्थलको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेका छन् ।